Gini bu, kedu na olee mgbe ikuku ikuku na-etolite | Netwọk Mgbasa Ozi
N’ezie, ị hụla ikuku ikuku na akpụkpọ gị ma na-eche etu esi akpụ ya na ihe kpatara ya. Ma ụwa ma mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ajụkwa oyi oge niile nyere ọnọdụ dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ na-adị n’etiti ehihie na abalị. Mgbe ikuku dị n'elu dị ọkụ karịa karịa ka ọ na-adị n'ehihie, ikuku na-ebili elu, na-eme ikuku nke ikuku.
You chọrọ ịmatakwu banyere ikuku ikuku?
1 Olee otu esi hiwe ya?
2 Olee mgbe e guzobere ha?
3 Njirimara nke oké osimiri ikuku
4 Agwaetiti na udu mmiri
5 The nkịtị
A maara ikuku ikuku dị ka virazón. N'ihi ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti ehihie na abalị, ihu ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ajụ oyi. Nke a na - ebute elu ụwa, mgbe ọ na - ekpoli ọkụ karịa karịa ka ọ na - eme ma na - eme ya tupu oke osimiri, Igbanye ọkụ ikuku na-ebili elu.
Mgbe ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili, ebe ọ bụ na ọ dị ọkụ karịa oke osimiri, ọ na-ahapụ oghere dị ala. Ikuku na ebili elu na elu ka ọ na-ekpo ọkụ na ikuku oyi dị nso n'elu oké osimiri na-ahapụ ebe nwere nrụgide dị elu, nke na-eme chọrọ ịnwe oghere ikuku nke gbagoro. Ya mere, ikuku ikuku nke nwere oke nrụgide n'elu oke osimiri na-agagharị na mpaghara nrụgide dị ala n'akụkụ ala ahụ.
Nke a na - eme ka ikuku si n’elu oke osimiri banye n’akụkụ oke osimiri ma bụrụ onye jụrụ oyi, ọ na - adịkarị ụtọ n’oge ọkọchị, ma oyi na - atụ n’oge oyi.
Olee mgbe e guzobere ha?
Oke ikuku mmiri na-etolite n’oge ọ bụla. Naanị ihe dị mkpa bụ maka anyanwụ iji mee ka elu ya dị ọkụ karịa ikuku dị n'akụkụ oke osimiri. Oge ndị ifufe na-erughị, enwere ike inwekwu oke osimiri, ebe ọ bụ na elu ala na-ekpokwu ọkụ karịa.
Igwe ikuku na-atọ ụtọ nke kachasị na-enwe mmetụta na-etolite na mmiri na ọkọchị maka eziokwu ahụ bụ na anyanwụ na-eme ka ihu ala dịkwuo ọkụ karịa na mmiri ka na-ajụ site n'oge oyi. Ruo mgbe oke osimiri na-abawanye n'ihi nsonaazụ ahụ, ikuku ikuku ga-aga n'ihu.
Ike nke ifufe na-ebugharị na-adabere na ikuku dị iche. Nke kachasị ihe dị iche n'etiti ọnọdụ okpomọkụ nke ihu abụọ ahụ, nke dị elu karị ifufe ọsọ, ebe ọ bụ na e nwere ikuku ọzọ nke chọrọ iji dochie oghere dị ala dị ala site na ịrị elu nke ikuku ọkụ.
Njirimara nke oké osimiri ikuku
Ikuku ebili mmiri na-ada n'akụkụ n'akụkụ akụkụ osimiri ahụ ma nwee ike iru 20 kilomita site n'oké osimiri. Ebe ọ bụ na achọrọ ọdịiche dị ọkụ dị n'etiti ala na oke osimiri, a na-enweta ike kachasị ike nke ikuku mgbe ehihie gachara, mgbe anwụ na-achasi ike. Ifufe ikuku na-adaberekwa na okwu nke mbara ala. Ọ bụ ezie na ha n'ozuzu ha na-abụkarị ìhè na ifufe na-atọ ụtọ, ọ bụrụ na okwu ahụ dị elu, ifufe nwere ike iru ihe ruru iri abụọ na ise.
Mgbe ụfọdụ, ntụgharị nke na-eme n'elu ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa na iru mmiri siri ike nke ikuku gbara ya gburugburu na-eweta site n'oké osimiri, na-etolite igwe ojii na-emepe emepe (nke a na-akpọ cumulonimbus) nke nwere ike ibute ọnọdụ nke enweghị ike ikuku na oke ifufe eletrik na oke mmiri ozuzo na obere oge. Nke a bụ mbido ụfọdụ ajọ ifufe nke ọkọchị a maara nke ọma: ndị na naanị n’ime nkeji iri abụọ, hapuru mmiri pọmpụ nwere ike ibute nnukwu mbibi.
Agwaetiti na udu mmiri
Agwaetiti ndị a nwekwara mmetụta nke ikuku na-eku n’oké osimiri dum. Nọmalị, ha na-arị elu mgbe etiti ehihie. Nke a na-akpata na ebe niile kachasị dabara adaba ụgbọ mmiri na-akụda mmụọ na ọ na-esiri ike ịchọta ebe ikuku ikuku anaghị efe ma ọ bụ na-esighi ike.
Otu ụdị ihe ahụ na-eme ka ikuku na-ebugharị ikuku, a na-akpụ ụfọdụ anụ mmiri. Mmetụta a nke ibi ikuku dị jụụ na mpaghara ikuku dị ala nke ikuku na-ebili elu na-arị elu, mụbara n'ọtụtụ buru ibu, na-eme ka ikuku dị ike ma na-etolite igwe ojii buru ibu ma dị egwu. Igwe ojii a na-ahapụ oke mmiri ozuzo dị ka ha dị udu mmiri na mpaghara dị nso na Himalaya.
N'oge ọkọchị, igwe ikuku nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-ekpo ọkụ ma na-arị elu, na-ahapụ mpaghara nke nrụgide dị ala n'elu ụwa. A na-edochi mpaghara a site na ikuku oyi site na oke osimiri nke na-esite na Indian Ocean. Mgbe ikuku a batara na mpaghara ahụ na-ekpo ọkụ, ọ na-erute mpaghara ugwu dị elu wee malite ịrịgo ya ruo mgbe ọ rutere ebe ndị dị elu ma jụụ, na-enye oke mmiri ozuzo dị oke oke.
Anyị kpọrọ terral n'ihi na o metụtara ikuku ikuku, n'agbanyeghị ọnọdụ ya na nsonaazụ ya dị iche. N’abalị, elu ụwa na-ajụ oyi ebe anyanwụ anaghị arụ ụdị ọrụ ọ bụla. Kaosinadị, oke osimiri na-echekwaba okpomoku nke na-eme kwa ụbọchị site na oge anwụ. Ọnọdụ a na-eme ka ifufe fee n'akụkụ nke ọzọ, ya bụ, site n'ala ruo n'oké osimiri. Nke a na - eme n'ihi na ikuku ikuku dị n'akụkụ oke osimiri dị elu karịa nke ala ma na --emepụta mpaghara nwere nrụgide nke ikuku dị ala. Ya mere, ikuku kacha oyi n’elu ụwa chọrọ ikpuchi ebe ahụ nsogbu dị ala ma na -emepụta ikuku dị n’oké osimiri.
Mgbe ikuku kachasị oyi site na ala zutere ikuku na-ekpo ọkụ site na oke osimiri, a na-akpụ ya ihe a maara dị ka terral. Ifufe dị ọkụ na-efe n'akụkụ oké osimiri.
Site na ozi a, o doro anya na ọ bịara dokwuo anya ihe kpatara ikuku ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osimiri n bfe
Maapụ mmiri ozuzo